अशान्तिको प्रमुख कारण लैंगिक हिंसा हो | KTM Khabar
२०७५ जेष्ठ १ गते १९:१७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । ‘जहाँ नारीहरु पुजिन्छ, त्यहा ईस्वरको बास हुन्छ’ भन्ने चाडक्यको नीति पढ्दा–पढ्दै निदाएकी म बिहान निन्द्राबाट आखा खुल्ने वित्तिकै मोवाईल अनलक गर्छु । अहिले शहरतिर प्राय सोसल मिडियामा मान्छे अभ्यस्त भई सकेकाले होला उठ्ने वित्तिकै हात मेवाईलमा गई हाल्छ । त्यो पनि फेसबुक हेर्नलाई । समाचार अनि साथिहरुको जमघट हुने माध्यम पनि भएको छ फेसबुक । म पनि सोसल साईडबाट पर छैन । विहानै समाचार हेर्छु । हेर्ने क्रममा म नारी भएकोले होला लैंगिक हिंसाका समाचार प्रायरिटिमा पर्ने गर्दछन् ।
लैगिक हिंसा भन्ने वितिकै के हो ? भन्ने लाग्न सक्छ । सामान्यतया महिलालाई गरिने हिंसा भन्ने बुझाई छ । यो स्वभाविक पनि हो । पुरुष भन्दा महिला र तेस्रो लिंगिहरु धेरै हिंसाको सिकार हुने गरेको अध्यनले बताउछ । बृहत रुपमा बुझ्ने हो भने महिला, पुरुष या तेस्रोलिंगि भएकै आधारमा पेशा, अध्ययन, कार्यालय, परिवार तथा समाज वा कुनै पनि ठाउमा घृणा गर्नु, कुटपिट गर्नु, जबरजस्ति यौनजन्य क्रियाकलाप गर्नु, डर देखाउनु, त्रास देखाउनु, धम्कि दिनु, तलब नदिनु, अश्लिल शब्द बोल्नु, अश्लिल फोटो देखाउनु, दुब्र्यवहार गर्नु, सोसल साईडमा यौनजन्य कुरा गर्नु, धम्किपुर्ण एसएमएस तथा फोन गर्नु, लिंगकै आधारमा अपमान गर्नु, होच्याउनु, समुहमा बसेको बेला गाली बेइजति गर्नु लैंगिक हिंसा हो । यदि कसैले यस्तो हर्कत गर्छ भने हिंसा गर्ने ब्यक्ति नेपाल सरकारको कानुन तथा संयुक्त राष्ट्र संघको हिंसा विरुद्ध सुन्य सहिष्णुताको नीति अनुरुप सम्बन्धित ठाउमा उजुरी गरेको खण्डमा कानुनी कार्बाही भोग्न बाध्य हुन्छ । तर मलाई यस्तो हिंसाको समाचार देख्दा मन भित्र आगो बल्छ । एक्काईसौँ शताब्दिसम्म आईपुग्दा पनि संसारभर नै भौतीक, सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक, शारीरीक, मानसिक बिभिन्न तरिकाले महिला माथि हुने हिंसा कायम नै रहेको ठहरमा पुग्छु । अर्को कुरा महिला माथि हुने अन्धविश्वास र कुरितिको कुसंस्कार अन्त्य हुन सकेको छैन भन्ने प्रमाण, बोक्सिका नाममा दिशा पिसाब खुवाएको समाचारले पुष्टि गर्दैछ । गरौ के मन खिन्न बनाउनु सिवाए केही छैन । कहिले काहीँ त लाग्छ नारीहरु नारी कै कारण पछी परेका छन् । साथिहरुसंग कुरा गर्यो राम्रो केटा खोज्ने हो ?, बिबाह गर्ने हो ?, के दुख गरिरहनु भएको ? भन्छन । मलाई त्यो पनि चित्त बुझ्दैन । आफु सक्षम नभई लोग्नेले कमाउला अनि खाउला भन्ने कमजोर मानसिकताका कारण पनि हामी हिंसाको सिकार भईरहेका छौ भन्ने निष्कर्षमा पुग्छु ।
नेपालमा मात्र हैन विश्वमै हिंसाका घटना भएका छन् । हिंसा त्यस्ता ब्यक्तिबाट भएको छ । जसमा प्राय शिक्षा छैन । हुनत शिक्षित मान्छेबाट पनि हिंसा नभएका भने हैनन । पढे–लेखेकाहरुले पनि हिंसा गरेको सुन्दा अचम्म लाग्छ । सायदै यो पुरुष प्रधान समाजको प्रतिफल हो । महिलालाई जे गर्दा पनि हुन्छ । यिनीहरु जिस्काउने माध्यम हुन् भन्ने पुरुष नामर्द सोचाईका कारण हिंसा हुन्छ होला । नभए पढे–लेखेका पुरुषहरुले यस्तो कर्म नगर्नु पर्ने हो । त्यसैले आजको टड्कारो आवश्कता अशिक्षितलाई शिक्षित बनाउने र शिक्षितलाई संस्कार सिकाएर विभेद अन्त्य गर्नु पर्छ । नभए यो नारी र पुरुषको संगमबाट श्रृजना भएको सुन्दर समाज पुरुषको सोचाईका कारण तहस–नहस हुन थाल्ने छ । सबै पुरुषहरु त्यस्तो हुुनुहुन्न् तर सबै पुरुषलाई नारीहरु सृष्टिका उपहार हुन यिनीहरुलाई कुदृष्टि लगाउन हुन्न भन्ने शिक्षा र दिक्षा दिन जरुरी छ । जसको कारण नारीहरु यो समाजमा सुरक्षित हुन सकुन । म ठोकुवा गर्दै छु–जबसम्म महिला माथि हिंसा हुन्छ । महिलाको योग्यता र मातृत्वको मुल्यांकन गरिदैन तबसम्म मुलुकमा शान्ति हुदैन । यो सत्य हो । अर्को कुरा जति बेलासम्म महिलाले पुरुष सरह अधिकार खोज्न आन्दोलन गरिन्छ । यसले समानता ल्याउदैन । यहाँ फिजिकल समानता खोजिन्छ अनि कसरी समानता हुन्छ ? प्रधानमन्त्री पुरुष भयो भने महिला पनि प्रधानमन्त्री नै हुनु पर्ने रे । हेर्नुस् त अचम्म क्वालिटि छ, छैन थाहा छैन । पदमा समानता चाहियो रे ? मैले नबुझेको कुरा नै यहि हो । जसरी एउटा पुरुषलाई साडी चोली लाएर सडकमा निस्किदा सुहाउदैन नि । हो त्यसैगरी महिलालाई पनि पुरुष जस्तो बन्छु भनेर कहाँ सुहाउछ ?, यहि भईरहेको छ । काठमाण्डौमा महिलाबादी धेरै संघ संस्था छन् तर कर्णालीमा गएर त्यहाकी चेलीलाई स्कुल पठाउने कुरा गरिदैन । यहा त काठमाण्डौमा बसेर पद र प्रतिष्ठामा समानता खोजिन्छ । धनकुटाको विकटमा गएर छोरी स्कुल पठाउनु पर्छ भनिदैन । सिंहदरबार भित्र पसेर हमीलाई समान पद चाहीयो भनेर टेवल ठोकिन्छ । अनी यसले कसरी महिला सक्षम हुन्छिन ?,
नारी र पुरुषमा समानता नखोजीयोस । नारी–नारी नै हुन तर नारीलाई स्कुल पठाईयोस, योग्य बनाईयोस । उनले आफ्नो अधिकार लडेर खोस्न सक्ने बनाईयोस । कमसेकम सिंहदरवार भित्र राज्यसंग टेवल ठोक्ने नारीहरुले कर्णालीकी छोरीको बेदना बुझुन । धनकुटाको विकट ठाउकी नारीको अबस्था बुझ्न र कानुन बनाउन कि ?, शिक्षा सबैको पहुचमा पुगोस । पैसाको कारण स्कुलबाट बञ्चित हुन नपरोस । पदमा समानता हैन, शिक्षामा समानता खोजीयोस् । त्यसले स्वत पदमा समानता ल्याउछ अनी देशले मुहार फेर्न सक्छ भन्ने लाग्छ ।
हिंसा भनेको जुसुकै ठाउमा होस । घरमा, पाठशालामा, कार्यालयमा, मेलापात जहाँ भए पनि अपराध हो । अपराधलाई मेलमिलापको रुपमा लिन हुदैन । अपराधिलाई कानुन बमोजिम पाता फर्काउनु पर्छ । राष्ट्रसंघको नीति बमोजिम विश्वका अन्य देशमा जस्तै हिंसा विरुद्ध शुन्य सहिष्णुता अपनाउने घोषित नीति पनि हाम्रो देशमा छ । त्यस्तै हिंसा विरुद्धको ऐन सरकारले जारि गरेको छ । यस अनुरुप हिंसा भएको खण्डमा पिडितले नेपाल प्रहरी, स्थानिय निकाय, महिला आयोग र अदालतमा समेत गरेर चार ठाउमा उजुरी गर्न सक्ने छन । यसरी हिंसा भयो भने डराएर हैन डटेर सामना गर्दै शिक्षाको माध्यमबाट महिला हिंसा रहित समाजको कल्पना गरौ । सबैभन्दा पहिले घर हिंसा रहित बनोस, समाज हिंंसा रहित बनोस । यसले देशलाई हिंसा रहित बनाउनेछ ।